GODAANNISA ARRABAA – Beekan Guluma Erena
GODAANNISA ARRABAA	Beekan Guluma Erena
Education, Seenaa April 10, 2016SEENENSSOO	15 Comments
236SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
Hiwi ~ Elona – Bitootessa 9/2016
Dargaggeessa Umriin isaa dhuma digdamootaa keessa jiru tokkotu ture. Dargaggoon kuni nama sammuu qaraa qabuufi barumsaan garmalee cimaa ture. Garuu, amalli isaa baay’ee rakkisaadha. Akkamalee ofittummaa baay’isa, daddafee dallana, jecha namaan jedhuuf of duuba hin ilaallatu. Sababuma amala isaa kanarraan kan ka’e, namni hiriyaa isaa ta’uu barbaadu tokkoyyuu hin jiru.
Amala badaa gurbaa kanaa irraa kan ka’e maatin isaa garmalee cinqamu, gar malee dhiphatu. Yeroo heddu irra deddeebi’anii gorsanis gorsa isaanii fudhachuu hin dandeenne. Kanumarraan kan ka’e abbaan isaa mala furmaata ni ta’a jedhee yaade tokko argate ilma isaa sana waamee akkana jedheen::::)
“Ilmoo koo akkuma atis beektu amala kana dhiisi siin jennaan diddee jirta. Sababa keetin anis, maatin keenna guutunis ummata jidduutti salfataa jirra. Haala kanaan yoo kan itti fuftu taate immoo ummata keessa gadi baanee deemuu hin dandeenyu. Kanaafuu, har’arraa eegalee waan ani hojjadhu siin jedhe hojjatta jedheeen.
Hodhu jedhee ~ Madooshaa ( Meeshaa Mismaara Ittiin Rukutan) fi Mismaara hedduu itti kenne. Ergasii akkana jedheen; har’arraa kaasee yeroo aartee jecha badaa dubbachuu barbaadde mismaara tokko ol fuudhii dallaa ( axirii ) manaa irratti sirritti dhayi jedheen. Fakkeenyaaf yoo ganamarratti wanti tokko isa aarse mismaara tokko muka dallaa irratti sirritti rukuta jechuudha.
Haaluma kanaan gurbaan hojii manaa kennameef kana hojjachuu eegale. Dallaan isaanii muka jajjabaadhaan waan ijaarameef mismaaraan rukutuudhaaf baay’ee rakkisaa ture. Akkasumattuu guyyaa duraa, adaduma aarun mismaara baay’ee muka dallaawaatitti dhaye. Akkasuma osoo jedhu guyyootni guyyoota, torbeen torbee dhale. Adaduma guyyaan achi adeemun Mismaara kana rukutaa ooluu waan hifateef , of dhukkubsaa oolurra obsa godhuun irra isaaf akka salphatu hubate. Sababa kanaan adaduma obsi isaa dabalaa adeemun, adaduma aarin isaa hir’achaa adeemun lakkoofsi mismaaraa inni dallaa irratti dhawaa adeemus hir’achaa dhufe.
Abbaa isaatitti deebi’ee jijjiirama amalaa argisiise kana gammachuudhaan itti hime. Abbaan isaatis, tolekaa ilma koo, jijjiiramni ati agarsiiste baay’ee nama gammachiisa. Ammammoo erga mismaarri ati guyyaa guyyaadhaan rukuttu hir’ataa deemee mee deemitii mismaarawwan mukatti dhoofte sanneen tokko tokkoon buqqisii fidi jedheen.
Gurbaanis akkuma jedhame sana mismaarota kanaan dura dallaa mukaa irratti rukute sanneen irra deemee buqqisee abbaa isaa waamee itti agarsiise.
Ilma koo ~ hojii nama boonsu hojjatte, baay’ee siin gammadeera, garuu mee amma boolloo mukaa kan mismaara keessaa buqqifte sana sirritti xiinxallii ilaali jedheen. Ati ammaan achi waan feete osoo gooteyyuu mallattoo muka irratti baye sana balleessuu hin dandeettu. Al tokko akka hin taanetti waraantee jirta ~
Argitee lafeekoo jecha hamaa namaan jedhuunis akkuma kana. Waan kabajaafi eennummaa namaa xiqqeessu, kan lafee namaa cabsu namaan jechuun muka mismaaran akka malee waraaname jechuudha. Jechoonni hadhaawwon kan kee onnee namaa irratti godaannisa hamaa dhiisaa dabru. Goodaannisni immoo waan gadi dhiisuu miti. Kanaafuu, hamma dandeetten ilmoo namaa kamiiyyuu osoo xiqqaaf guddaa hin jedhin jaalalaafii kabajaan waliin jiraachuuf yaali. Yoomiyyuu taanan dubbii hin darbatin. Erga jecha lafee nama waraantee cabsitu namaan jetteen booda osoo hamma feete dhiifama kan gaafattus ta’ee gadaannisni dubbii keetii yoomiyyuu akka irraa hin badne yoomiyyuu hin irraanfatin✍
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa236SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← MAALIIF AFAAN OROMOO BARANNAA?
NYAATAAFI DHUGAATII AADAA OROMOO →
15 thoughts on “GODAANNISA ARRABAA”	abdiiApril 10, 2016 at 8:26 pmPermalink	maaloo galatoomi ati beeka oromoo jiraadhu ammallee
Reply	MelkamuDerejeApril 11, 2016 at 4:22 amPermalink	…….Ilma seenaa taanaan akkas ta’u……….”yoo dhalchan akkas dhalchuu maal godhu kachachaltuu”oromoo……jabaadhu..seenaas boraafadhu!
Reply	geletaApril 11, 2016 at 11:17 amPermalink	Baay’ee namatti tola galatoomi!
Reply	Ayyaanoo LeenjisooApril 11, 2016 at 9:58 pmPermalink	BEEKAN GULUMMAA nuuf jiraadhu waaqayyo umrii kee nuuf haa dheeressu.afaan keenya guddisuun dirqama hunda keenyati
Reply	Darara ayanaApril 19, 2016 at 12:22 pmPermalink	BEEKAAN DHUGUMA BEEKAADHA.Umurii dheeraa sammuu baldhaa rabbii dabalee siif haa kennuuuuu.lammii jechuun akkasii.
Reply	Hulluuqaa GammadaaJuly 23, 2016 at 12:30 pmPermalink	Beekaan Gulummaa guddaa galatoomi! Waan hedduu nu hubachiifte.Gara fuula duraattiis waan hedduu hubanna.Rabbi Guddaan umurii kee haa dheeressu.jabaadhu!!!
Reply	Habtamu Tizazu LelisaJuly 27, 2016 at 1:56 pmPermalink	waaqayyoo lubbuu kee nuf
haa dheereessuu ani guyya guyyaan waan at gadlakkistu hamma tokko nan ilaala kan akka kee osoo baay’ee qabaannee … akkaminii waliin itti haa yaadnuu galatoomii ulfaadhuu guddadh,uu Beekaa Kenya!
Reply	jirenyaaDecember 2, 2016 at 1:17 pmPermalink	sanyii koo bagaa tatee
Reply	Dame shumaa universitii JimmarraSeptember 13, 2016 at 9:47 pmPermalink	atii dhugumaa bekaa Oromooti
Reply	mame abdetaNovember 19, 2016 at 6:40 amPermalink	sanyii oromoo baga tate siin boonna dhiiroo.galatoomi nuuf jiraadhu.
Reply	daraaraaFebruary 1, 2017 at 9:25 amPermalink	hayyuu keenyaa nuuf buli beekan
Reply	AnonymousFebruary 9, 2017 at 6:47 amPermalink	Asoosame ati post goote dubbisee jira.
hayyuu jedhamta hedduu galatoomi. duuba deebi’uun hin barbaachisu.
oduu sobaa mandaraaf iddoo kennuun hin eyyamamu. cimii jabaadhuun dhaamsakooti.horii buli. jabaadhu ammallee AFAAN OROMOO GUDDISUUN KARAAKEE MILKAA’AA JIRA. WOW WOW WOW!!
Reply	Taayyee GirmaaFebruary 22, 2017 at 12:23 pmPermalink	Guddaa galatoomi Beekaan keenya,bagummaa keenya taatee.
Reply	abebu hirpesaFebruary 24, 2017 at 4:19 pmPermalink	jiraadhu waqayyo umrii kee haa dheeressu
Reply	AnonymousMarch 11, 2017 at 7:28 pmPermalink	sin boona itti fufi